Macluumaadka COVID-19 Information
Wixii soo kordhay, May 25, 2021:
Laanta Garsoorka ee Minnesota waxay weli ku jirtaa marxalad kumeel gaar ah, sida ku xusan amarradaan ka soo baxay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Minnesota Garsoore Sare Lorie S. Gildea:
Amarka lagu kordhinayo dacwooyinka lagu qabanayo maxkamadda gudaheeda, laga bilaabo Juun 14, 2021 - Sebtember 6, 2021 – May 25, 2021
Amarka dib-u-bilaabidda dhammaan nuucyada kala duwan ee dacwooyinka dembiyada ee Xeerbeegtida ee lgu qabanayo Maxkamadda gudaheeda, iyada oo la kordhinayo imaatinka xadidan ee xarumaha maxkamadda ilaa Juun 13, 2021 – March 22,2021
Amarka xirashada daboolka sanka iyo afka ee gudaha xarumaha Maxkamadda – July 13, 2020
Si loo sii wado hawlgallada hab mudnaanta koowaad siinaya caafimaadka iyo nabadgelyada, laga bilaabo Juun 14, 2021 ilaa Sebtember 6, 2021 waxaa dhaqan gelaya qodobbadaan soo socda:
Dacwooyinka ay Xeer Beegtidu dhegeeysaneeyso waxaa lagu qaban doonaa Maxkamadda gudaheeda.
Dacwooyinka Madeniga ah ee ay Xeer Beegtidu dhegeeysaneeyso waaa lagu qaban karaa Maxkamadda gudaheeda.
Kiisaska ciyaalka ee ay ka mid yihiin dembiyada waaweeyn, Ilaalinta Caruurta (oo ay ku jiraan CHIPS iyo Joogteeynta hooyga), iyo qaadidda kiisaska xad gudubyada ee dhallinta iyo dhagaysiga kiisasaka laysku haysto waxaa lagu qaban doonaa Maxkamadda gudaheeda.
Shirarka ku sabsan dembiyada xalka laga gaarayo waxaa lagu qaban doonaa Maxkamadda gudaheeda.
Kulanka Xeerbeegtidu ku baarayaan hadduu jiro dembi dacwad laga soo oogi karo waxaa lagu qaban Maxkamadda gudaheeda.
Dembiyada dhexe ee ay khasabka tahay in maxkamadda la hor geeyo iyo dacwooyinka laysku haysto waxaa qorshuhu yahay in lagu qabto Maxkamadda dhexdeeda laga bilaabo August 2, 2021
Dhammaan dacwadaha kale ee maxkamadda degmada waxaa lagu qaban doonaa habka fogaal aragga haddii uusan Garsooraha Sare ee Maxkamadda Garsoorku soo saarin amar daruuri ka dhigaya marxlad khaas ah awgeed in dacwada lagu qaado Maxkamadda gudaheeda.
Maxkamadaha Rafcaanka: Dacwadaha racfaanka ee la horkeenayo maxkamada racfaanka ee Minnesota iyo maxkamada sare ee Minnesota ayaa usii socon doona sida ay u qorsheeyeen maxkamadahaasi.
Qaabilaadda dadweeynaha: Ugu yaraan hal miis oo looga adeego dadweynaha waa in laga furaa degmo kasta iyo maxkamadaha rafcaanka inta lagu jiro saacadaha shaqada caadiga ah, marka laga reebo ciidaha maxkamadda. Gelitaanka xarumaha maxkamadda waxay ku xiran tahay shuruudo ay bixiyaan saraakiisha degmada. Adeegyada waxaa lagu bixin karaa habka fogaal aragga (Zoom), ballan la sii qabsado ama in shaqsi ahaan loo tago . Halkaan kala xiriir Contact the county court maxkamadda degmada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Qaabilaadda Warbaahinta: Arrimaha ku saabsan waxyaalaha kusoo kordhay hawlgallada maxkamadda degmada iyo helitaanka kombuterka ay dadweynuhu wax ka baartaan ee maxkamadda kala xiriir Xafiiska Warfaafinta Maxkamadda
Adeegyada qofku uu iskii hawl uga dhammeeysanayo maxkamadda - Self-Help Center- waxaa loo baahan yahay in ballan loo sii qabsado, ama loo adeegsado aaladda fogaal aragga (Zoom) ama Telefanka.
Maktabadda Sharciga ee Gobolka Minnesota waxaa loo furayaa oo kel ah qofkii halkaan Minnesota State Law Library ballan ka sii qabsada.
Hab Maamuuska Caafimaadka iyo Ammaanka:
Waqtigaan la joogo, dhamaan maxkamadaha gobolka amarku weli waa in la kala durko oo laysu jirsado ugu yaraan lix feet iyo in la daboosho sanka iyo afka dhamaan marka lasoo galo dhismeyaasha maxkamadaha ilaa Juun 13, 2021. Isu diyaarinta COVID-19 ee Laanta Garsoorka ee Minnesota - Minnesota Judicial Branch COVID-19 Preparedness Plan waxaa looga hadlayaa talaabooyinka looga hor tegayo faafidda cudurka iyo hab-maamuuska ay tahay in maxkamadaha gobolku ay u adeegsadaan arrimaha la xiriira imaanshaha maxkamadda gudaheeda laga bilaabo Juun 14, 2021.
Kala Durugsanaanta dadku ma aha khasab marka in yar oo kooban la isla joogayo dadkuna ay xiran yihiin daboolka sanka iyo afka. Isla joogitanka kooban waxaa lagu qeexaa marka dad ka kala socda labo qooys ama ka badan ay isu jirsadaan inta u dhexeeysa 6 feet muddo ka yar 15 daqiiqo, 24 saac gudahood.
Daboolka Sanka iyo Afka waa in la xirto gudaha qolalka maxkamadda iyo goobaha ay Xeerbeegtidu uga baaraan degayaan dacwada. Garsoorayaasha dacwada qaadaya ayaa ogolaan kara in la iska furo daboolka sanka iyo afka hadii loo arko inay lagama maarmaan tahay, ilaa iyo inta ay suurto gal tahay in la kala durugsanaan karo oo lix feet la isu jirsan karo. Daboolka sanka iyo afka meelaha caamka ah ee Maxkamadda oo gobolku leeyahay waxaa keliyee ay khasab tahay in la xirto haddii uu jiro amar ka soo baxay dawladda. Maxkamadda gudaheeda qofkii doonaya inuu xirto daboolka sanka iyo afka xor ayuu u yahay.
Ogeysiinta ku saabsan isku daarashada cudurka: Maxkamaduhu waxay u soo diri doonaan ogeysiin qof kastoo ka ag dhawaadey qof laga helay cudurka COVID-19, iyadoo laga tix raacayo hoggaanka iyo hagitaanka Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota.